Ciidanka Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isaga baxay Deegaanka HALGAL ee Gobolka Hiiraan | warsanradio baydhabo
Home WARARKII MAANTA	Ciidanka Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isaga baxay Deegaanka HALGAL ee Gobolka Hiiraan
written by warsan radio 16/08/2015
Axad, Ogoosto 16, 2015 (WSR) — Wararka aan ka helayno deegaanka Halgan ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Saacadihii hore ee Maanta ay halkaas ka baxeen Ciidamadii DFS iyo kuwa Midowga Afrika AMISOM oo dhawaan kala Wareegay Xoogagga Al-shabaab.
Odayaal iyo waxgarad ku sugan Halgan oo goor dhaw la hadlay HOL ayaa inoo sheegay in Saraakiisha Ciidanka Dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku War-galiyeen inay ka baxayaan deegaanka ayna markiiba dib ula Wareegtay Al-shabaab.
Illaa iyo hadda lama oga halka ay wajaheen Ciidammada Dowladda iyo kuwa AMISOM, waxaana dhinaca kale jirta baqdin xoog leh soo fod saartay dadka rayidka ah oo ka cabsi qaba wax yeello ka soo gaartay Al-shabaab, iyaga oo lagu batilmaameesanayo in ay gacan u fidiyeen ciidammada dowladda iyo AMISOM mudadii ay joogeen deegaanka.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay taliska ciidammada dowladda iyo kuwa AMISOM oo la xiriira sababta keentay in ay isaga baxaan deegaanka Halgan oo ah saldhig muhiim u ah isku xirka magaalooyinka Beledweyne iyo Buula-burte.
Ciidanka Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isaga baxay Deegaanka HALGAL ee Gobolka Hiiraan was last modified: August 16th, 2015 by warsan radio
Maamulka Koonfur Galbeed oo ka hadlay howlgal ay Sameeyeen